လူကို အောင်နိုင်ပုံ | စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
Alicia tomero | 21/11/2021 11:51 | စုံတွဲနှင့်လိင်
၏အနုပညာ လူတအောင်နိုင် ၎င်းသည် ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက် ကျင့်သုံးခဲ့သော အရာဖြစ်သည်။ ဆွဲဆောင်မှုပုံစံသည် နှစ်များကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲလာကာ အဆိုပြုချက်တစ်ခုအတွက် သင့်လျော်သောနည်းစနစ်များသည် ခေတ်မီသည်ထက် များစွာပိုပါသည်။
ယနေ့ ကျင့်သုံးနေသော အခြေခံအချက်များ အားလုံးသည် ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သရုပ်ဆောင်မှုပုံစံ သို့မဟုတ် လွတ်လပ်သောဆန္ဒသည် အမြဲတမ်းပြောင်းလဲသွားသော်လည်း၊ လူတစ်ယောက်ကို အနိုင်ယူဖို့ နည်းလမ်းတွေရှိတယ်။ မှန်ကန်သောပုံစံနှင့် ကိုက်ညီသည်။
ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အနိုင်ယူခြင်းကြုံလာသောအခါ အမြဲမေ့လျော့မနေပါနှင့် ယောက်ျားတို့၏ အလေ့အထဖြစ်ခဲ့သည်။. ဒါပေမယ့် ငါတို့က ကိုယ့်ကိုကိုယ် လှည့်စားမှာမဟုတ်ဘူး၊ အခု အမျိုးသမီးတွေလည်း သူတို့ရဲ့ အောင်ပွဲတွေကို လိုချင်နေကြပြီး ဒါကို သူတို့ တာဝန်ခံပြီး အသေးစိပ် သိဖို့လိုတယ်။ အဲဒီ အောင်ပွဲ ကို ဘယ်လို စရမလဲ။
1 သင့်ကိုယ်သင် မိတ်ဆက်ပြီး သင်မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေကြောင်း သင့်ကိုယ်သင် ပြသပါ။
2 မင်းရဲ့ဆက်ဆံရေးက ဘယ်လိုဖြစ်သင့်လဲ။
5 အဲဒီလူကို လေးစားပြီး အချိန်ပေးပါ။
သင့်ကိုယ်သင် မိတ်ဆက်ပြီး သင်မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေကြောင်း သင့်ကိုယ်သင် ပြသပါ။
၎င်းသည် သင်နှင့်တွေ့ဆုံရမည့်လူကို သင်ပေးနိုင်သော အကောင်းဆုံးအကဲဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ငါတို့သိတယ်။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်သည် ပထမအရည်အသွေးများအတွင်း ကျရောက်နေသည်။ ပထမတစ်ချက်မှာ ပေါ်လွင်ထင်ရှားသော်လည်း ထိုအမျိုးသမီး၏ ပင်ကိုယ်စရိုက်ကို အကဲဖြတ်သော အမျိုးသားများစွာရှိသည်။
အဆက်အသွယ်လုပ်ပါ။ မင်းရှိတယ်ဆိုတာ ပြရမယ်။
ပြုံးပြီး မိတ်ဆက်ပါ။သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သူမဟုတ်သည်ကို ဟန်ဆောင်၍မရပါ၊ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြသမည့်ရက်စွဲများ ထပ်မံလိုချင်ပါက၊
ရ ယုံကြည်မှုရှိပါစေ။မင်းရဲ့စကားနဲ့ လုပ်ရပ်အတွက် လုံခြုံမှုရှိစေရမယ်။
မင်းရဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ဟာ အရေးအကြီးဆုံးအရာမဖြစ်ရဘူး၊ ပြီးပြည့်စုံနေလို့မရဘူး မင်းရဲ့ရုပ်ရည်က သပ်ရပ်ပြီး သပ်ရပ်နေရမယ်။. မှန်ကန်သောဆံပင်နှင့် မိတ်ကပ်လိမ်းခြင်းဖြင့် ဂုဏ်ယူတတ်သူဖြစ်ရန် လိုအပ်ပြီး သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို အမှတ်အသားပြုသော ရေမွှေးထည့်နိုင်သည်။
မင်းရဲ့ အပြုံးမပျက်ပါစေနဲ့ လှပသော ခင်မင်ရင်းနှီးမှု စတင်ခြင်း၏ အဓိက အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ သူ့ကို မျက်လုံးထဲမှာ ကြည့်ပါ။ ရှက်နေရင်တောင်မှ လုံခြုံမှုကိုပြသတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ။ စကားပြောဆိုမှုသည် ဆက်သွယ်မှုရှိရမည်။. ဇာတ်ဆောင်ဖြစ်ဖို့ မစောင့်ဘဲ မင်းရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအကြောင်း အမြဲပြော၊ အဲဒါကိုလည်း နားထောင်ပါ။
သူတို့ပြောသမျှကို သေချာနားထောင်ပါ။သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် သူ့ကိုထောက်ခံပါ၊ အကြံဉာဏ်ပေးကာ အသုံးဝင်နိုင်သော မည်သည့်အကြံဉာဏ်မျိုးကိုမဆို ပေးဆောင်ရာတွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိပါ။ အမျိုးသမီးများအတွက် အသုံးဝင်သော ကိရိယာများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပံ့ပိုးကူညီမှုအားလုံးကို ကမ်းလှမ်းပါ၊ လူသည် လေးမြတ်လိမ့်မည်။
အရေးမကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေကို ငြင်းခုံခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ အမြဲတမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ အဲဒီ့ကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်အတွက် မင်းရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကို ပြသလိုက်ပါ။ အမြဲပြရမယ်။ စာနာမှုနှင့်ပျော်စရာ ကောင်းသောတုန်ခါမှုကိုသက်ဝင်စေရန်။ ပြဿနာသေးသေးလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဆက်မပြတ် ငြင်းခုံခြင်း သို့မဟုတ် ဒေါသမထွက်နိုင်ဘဲ၊ ဒါက သင့်ကို လမ်းလျှောက်သွားစေပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါကို နားထောင်ပြီး အာရုံစိုက်တာက မမှားပါဘူး။ သူ မင်းကို ကြိုက်တာကို မင်းစိတ်ဝင်စားအောင် ကမ်းလှမ်းပါ။ ဒါပေမယ့် အရမ်းကြီးတော့ ပါဝါမပေးပါနဲ့၊ အဲဒါကို သင်သိအောင်လုပ်ပါ။ မင်းမှာလည်း ကိုယ်ပိုင်ဘဝရှိတယ်။.
မင်းရဲ့ချိန်းဆိုမှုမှာ မင်းလုပ်နိုင်တယ်။ စကားစမြည်ပြောပါ၊ ပျော်ရွှင်ပါ၊ အချင်းချင်းတွေ့ဆုံပါ။... ဘယ်လောက်ပဲ ထာဝရတည်မြဲနေပါစေ၊ မင်းလုပ်နိုင်တယ်။ ပွဲရုတ်တရက်အဆုံးသတ်။ သင့်စိတ်ဝင်စားမှု ရှိနေသေးသည်ဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း အခြားတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန် လိုအပ်သည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့် သင်သည် နောက်တစ်ကြိမ် ချိန်းဆိုရန် ပြန်သွားလိုပြီး သင့်အကြောင်း တွေးကာ လွမ်းဆွတ်နေလိမ့်မည်။
ဒီအပိုင်းက တစ်ဖက်လူကို အာဏာမပေးတာနဲ့ သက်ဆိုင်တယ်။ အဲဒါကို ကောက်ချက်ချရမယ်။ ပထမနေ့တွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရှုံးမပေးနိုင်ဘူး။ အားလုံးကို ပေးလိုက်ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့် ၎င်းတို့သည် အမြတ်ငွေများအားလုံးကို ရရှိပြီး ရေရှည်တွင် စိတ်ဝင်စားမှု အားလုံးကို ဆုံးရှုံးမည်ကို မြင်သည်။
မင်းဘယ်လိုနေလဲ ဖြည်းဖြည်းချင်းရှာကြည့်ရအောင်။ စူးစမ်းချင်စိတ်က သူ့ကိုဖမ်းစားနိုင်အောင် ပထမနေ့တွေမှာ မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ပေမယ့် အေးအေးဆေးဆေး ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အများကြီးကယ်တင်ပါ။ ဂိမ်းတစ်ခုလိုပါပဲ၊ မင်းလုပ်ရမယ်။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဖန်တီးပါ၊ အဲဒီအတိုးကို ထိန်းသိမ်းရမယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို လွန်ကဲစွာ မယူလိုက်ပါနဲ့၊ မင်း အဲဒီစိတ်ဝင်စားမှုကို ပြသပြီး ပထမအခိုက်အတန့်ကတည်းက ရေကန်ထဲကို မခုန်ချရဘူး။
အဲဒီလူကို လေးစားပြီး အချိန်ပေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာလိုအပ်ပြီး ရုတ်တရက်စဉ်းစား၍မရပါ။ လေးနက်သောဆက်ဆံရေးကို ညတွင်းချင်းစတင်ပါ။ မင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေက မတူကြသလို မင်းသူနဲ့ ရင်းနှီးပြီး သူ့ကုမ္ပဏီကို ပျော်ဖို့ အချိန်အများကြီး ပေးချင်ပါတယ်။ ဆက်ဆံရေးကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားပြီး အတင်းမပြသင့်ပါဘူး။စိတ်ပျက်အားငယ်မှုကို ပိုသတိထားမိလေလေ၊ မင်းနဲ့ဝေးကွာလာလေလေပါပဲ။ အဲဒီကောင်လေးကို သူ့ဘဝနဲ့သူ ပျော်အောင်ထားရမယ်၊ သူကြိုက်တဲ့အရာတွေနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းနေတာကို ဆက်ပြောပြနေရမယ်။
သူယုံကြည်နိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးဖြစ်ရမယ်။ပြဿနာတစ်ခုခုကြုံလာတဲ့အခါ ခိုလှုံရာအဖြစ် ပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ အေးအေးဆေးဆေး သက်တောင့်သက်သာ ခံစားရတာက ဘယ်သူမဆို ဦးစားပေးပါ။ သူတို့ကြိုက် နားထောင်မယ့်သူနဲ့ ရင်ဖွင့်ပါ။သူတို့ရဲ့မလုံခြုံမှုတွေ၊ သူတို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို ပြောပြနိုင်စေဖို့နဲ့ သူတို့ကို ကူညီပေးဖို့ တစ်စုံတစ်ယောက်ရှိဖို့ပါ။ ဒါတွေအားလုံး ထိန်းထားနိုင်ရင် မင်းလုပ်နိုင်မှာပါ။ အနားမှာ တစ်ယောက်ယောက်ရှိလား။ အဲဒါက မင်းအတွက် သူ့ရဲ့ထင်ယောင်ထင်မှားကို ပြနေတာ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » စုံတွဲနှင့်လိင် » လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲ။
အိမ်ထောင်ရှင်ယောက်ျားက တခြားမိန်းမကို ချစ်မိတဲ့အခါ ဘာလုပ်မလဲ။